တောင်သမန်သားလေး: ♪ " မင်မိုရီကတ်နှင့် သတိပြုစရာများ " ♫
♪ " မင်မိုရီကတ်နှင့် သတိပြုစရာများ " ♫
အရင်တုန်းက မင်မိုရီကတ်တွေကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာထဲထည့်ပြီး သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်းခေတ်ရောက်လာတော့ စမတ်ဖုန်းနဲ့ တက်ဘလက်တွေထဲ မင်မိုရီကတ်ကို မဖြစ်မနေ ထည့်သုံးလာကြရပါတယ်။ မင်မိုရီကတ်တွေကို အခုအချိန်မှာ တစ်သက်တာ warranty နဲ့ ရောင်းလာပါတယ်။ ဒါဖြင့် အဲဒီကတ်တွေက တစ်သက်လုံးခံသလားလို့ မေးစရာရှိတယ်။ မခံပါဘူး။ မကြာခဏ အသွင်းအထုတ်လုပ်ရင် မင်မိုရီကတ်က ငုတ်ကလေးတွေစားပြီး အထဲက data တွေ ဖတ်လို့မရတော့တဲ့ ပြဿနာရှိပါတယ်။ သူတင်မကဘဲ ဖုန်းထဲ၊ တက်ဘလက်ထဲက card reader ငုတ်ကလေးတွေပါစားပြီး ကတ်မသိတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် မင်မိုရီကတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့ ပြဿနာအတော်များများလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဘာတွေလည်း ... ။
1. ကတ်ထဲက ဖိုင်တွေကို ကူးနေတုန်းမှာ Property loss warming ပေါ်ခြင်း။
ကွန်ပျူတာထဲက content တွေကို မင်မိုရီကတ်ထဲကူးတဲ့အခါ တစ်ခါတလေ property loss ဆိုတဲ့ သတိပေး message ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပေါ်ရတာလည်းဆိုရင် hard drive နဲ့ မင်မိုရီကတ်ကို format ချထားတဲ့ပုံစံခြင်း မတူလို့ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား device တွေနဲ့ တွဲဖက်သုံးစွဲနိုင်မှု (Compatibility) အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် မင်မိုရီကတ်တွေကို FAT 32 ဆိုတဲ့ ဖိုင်စနစ်ဟောင်းသုံးပြီး format ချလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ pre-formatted ဆိုရင်လည်း FAT 32 ကိုပဲ သုံးတာများပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Windows စနစ်သုံး hard drive တွေမှာ Windows XP လောက်မှာကတည်းက NTFS ကို သုံးတာရှိလာပါတယ်။ Windows7လောက်သုံးလာချိန်မှာ Hard drive အများစုကို လုံခြုံရေးပိုကောင်းတဲ့ NTFS စနစ်နဲ့ format ချလာပါတယ်။ NTFS ဟာ FAT 32 ထက်စာရင် meta data တွေကို ပိုပြီးလည်း သိုလှောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် data တွေကို NTFS ကနေ FAT 32 ထဲကိုပို့ပြီး သိုလှောင်ရင် တချို့သော data တွေ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီး လာသတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
မင်မိုရီကတ်တွေကို NTFS စနစ်နဲ့ပြောင်းပြီး format အသစ်ရိုက်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာတွေ၊ တခြားသော device တွေနဲ့ တွဲဖက်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း ကင်းမဲ့သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကွန်ပျူတာထဲက ဖိုင်တွေကို မင်မိုရီကတ်ထဲ ကူးနေတုန်းမှာ Warming message ပေါ်လာခဲ့ရင် ဟုတ်ကဲ့ သိပါတယ်ဆိုပြီး Yes ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Copy လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်ပြီး လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Format စနစ်မတူတဲ့အတွက် ဘယ်လို meta data တွေ ဆုံးရှုံးသွားသလဲဆိုတာ သိချင်ရင် မူရင်းဖိုင်ပေါ်မှာ ညာကလစ်ထောက်ပါ။ ပြီးရင် ပေါ်လာတဲ့အကွက်ထဲက properties ကို ရွေးပါ။ ပြီးရင် မင်မိုရီကတ်ထဲ ရောက်သွားတဲ့ဖိုင်ကိုလည်း အလားတူလုပ်ပါ။ ဖိုင်အရွယ်အစားကိုယှဉ်ကြည့်ပြီး meta data ဘယ်လောက် ဆုံးရှုံးသွားသလဲဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေကို PC ထဲကနေ ကူးယူတဲ့အခါမျိုးမှာ meta data နဲ့ပတ်သက်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိပါဘူး။ တခြားဖိုင်အမျိုးအစားတွေကို ကူးယူတဲ့အခါမျိုးမှာသာ meta data တချို့ ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။
2. Auto Play Box ပေါ်မလာတော့ဘဲနေခြင်း။
ကွန်ပျူတာမှာ မင်မိုရီကတ်ပဲထိုးထိုး၊ မင်မိုရီစတစ်ပဲထိုးထိုး Auto Play Box မလွဲမသွေပေါ်ရပါမယ်။ USB Security ခံထားရင်တောင် Auto Play Box ပေါ်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ မင်မိုရီကတ်ထိုးစိုက်ရဲ့သားနဲ့ Windows ထဲမှာ အဲဒီ box လာပြီး မပြတော့ဘူးဆိုရင် control panel ကို ဖွင့်ပါ။ Hardware and sound ဆိုတဲ့အကန့်ကို ဆက်ဖွင့်ပါ။ အဲဒီလိုဖွင့်လိုက်ရင် Auto Play ကို တွေ့လာရပါမယ်။ Use Auto Play for all media and devices ဘေးက ဘေးမှာအမှန်ခြစ် ရှိ မရှိ သေချာအောင်ကြည့်ပါ။ မရှိရင် ကလစ်နှိပ်ပြီး အမှန်ခြစ်ပေါ်အောင် လုပ်ပေးပါ။ ပြီးရင် dropdown menu ကို ကလစ်နှိပ်ခေါ်ပြီး decide what windows should do with the various media types(discs) မှာလုပ်သင့်တာ တစ်ခုခုရွေးပေးပါ။
နောက်တစ်ခုလုပ်လို့ရတာက Hardward and sound အကန့်ထဲမှာပဲ အောက်ဖက်အထိဆင်းသွားပြီး Reset all defaults ကို ရွေးပါ။ ပြီးရင် save ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ Windows 10 မှာဖြင့် အရင်ပေါ်နေကျ Auto Play box ပေါ်မလာတော့ပါဘူး။ အဲဒီ box အစား screen ရဲ့ အောက်ဖက် ညာဖက်ထောင့်မှာ notification box သေးသေးလေးပေါ်ပါမယ်။ အဲဒီ notification ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး option တွေ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Notification ပေါ်ပြီး ခဏအတွင်း အမြန်အဆန် ကလစ်နှိပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာမှမလုပ်ဘဲထားရင် လေးငါးစက္ကန့်အကြာမှာ notification box သူ့ဘာသာ ပျောက်သွားပါမယ်။
3. မင်မိုရီစတစ်ထဲကို Copy ကူးလို့မရတဲ့ ပြဿနာ၊ Save လုပ်လို့မရတဲ့ ပြဿနာ ရှိခြင်း။
မင်မိုရီကတ်ထဲ ဘာမှကူးထည့်လို့မရဘူးဆိုရင် ကတ်ပျက်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကတ်မှာရှိတဲ့ write protect mode ကိုလည်း တစ်ချက်စစ်ကြည့်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ မင်မိုရီကတ်တွေရဲ့ ဘေးဖက်မှာ write protect switch လေးရှိတယ်။ မင်မိုရီကတ်ထဲက data တွေ မပျက်အောင် ယာယီထိန်းထားဖို့ သုံးပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အဲဒီခလုတ်လေးရှိမှန်း လူတွေက သတိမထားမိတာ များပါတယ်။ ခလုတ်ကို အောက်ဖက်ဆွဲချထားတဲ့အနေအထားက Write protect on ထားပါတယ်။ ကတ်ထဲကို ဘာမှ copy ကူးလို့မရ save လို့ မရပါဘူး။ ခလုတ်လေးအောက်ဖက်ရောက်နေရင် အပေါ်ဖက်ကို တွန်းရွှေ့ပေးလိုက်ပါ။ Write protect off ဖြစ်သွားပါမယ်။ မင်မိုရီကတ်ထဲမှာ copy နဲ့ save လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပြန်လုပ်လို့ရလာပါမယ်။ ဒီပြဿနာ နောက်ထပ်မပေါ်ချင်ရင် ခလုတ်လေးကို အပေါ်တွန်းပို့ပြီး သူ့အောက်ဘက်မှာ ဆယ်လိုတိတ်သေးသေးပတ်ပြီး အောက်ဖက်ကို ဆွဲချလို့မရအောင် လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
4. ကူးလိုက်သမျှ ဖိုင်အသစ်တွေမှာ အင်္ဂါချို့ယွင်းမှုရှိနေခြင်း။
အင်္ဂါချို့ယွင်းမှုရှိတယ် (corrupted) ဆိုတဲ့အခြေအနေကို ဖိုင်တွေမှာ တွေ့နိုင်သလို Optical disc တွေ၊ မင်မိုရီကတ်တွေ၊ မင်မိုရီစတစ်တွေမှာလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သိုလှောင်ရေးပစ္စည်းတွေမှာ corrupted ဆိုရင် ဘာဖိုင်မှ ကြည့်လို့မမြင်ရတော့ပါဘူး။ တကယ်လို့ ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို corrupted လို့လာပြရင် အဲဒီဖိုင်ကို ဖွင့်လို့မရတော့ပါဘူး။ ဓာတ်ပုံဖိုင်တစ်ဖိုင် corrupted ဆိုရင် ဖိုင်ကယ်တင်ရေး saftware နဲ့ ဖွင့်ရင်တောင် ပုံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲ မြင်ရပါမယ်။ မင်မိုရီကတ်ပေါ် ကူးတင်လိုက်တဲ့ ဖိုင်အသစ်တွေ ဘာကြောင့် corrupted ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်း မရှိပါဘူး။ များသောအားဖြင့် data ၀င်ဆန့်မှုကို လိမ်ပြီးပြထားတဲ့ မင်မိုရီကတ်တွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ - 2GB ၀င်ဆန့်တဲ့ကတ်ကို 4GB လို့ ပြထားတာမျိုးပေါ့။
ဒီလို မင်မိုရီကတ်အလိမ်ထိရင် ပထမပိုင်းကူးထည့်သမျှဖိုင်တွေဟာ အဆင်ပြေနေပါမယ်။ Windows ကတောင်မှ လိမ်ပြီးပြထားတဲ့ capacity အတိုင်း လိုက်ပြနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကတ်တဖြည်းဖြည်း ပြည့်လာတာနဲ့အမျှ ပြဿနာတွေ တဖြည်းဖြည်းတက်လာပါမယ်။ ဆိုကြပါစို့ 1GB ပဲရှိတဲ့ကတ်ကို 32GB လို့ပြထားမယ်ဆိုရင် 1GB မပြည့်ခင်အထိ အလုပ်လုပ်တာ အားလုံးအိုကေပါမယ်။ 1GB လည်း ပြည့်ပြီးဆိုရော ကူးထည့်သမျှ ဖိုင်တွေကို corrupted လိုလားပြီး ပြပါမယ်။ ကံဆိုးတာကတော့ အင်ထုထားတဲ့ မင်မိုရီကတ်တွေကို ပြန်ပြီးပြုပြင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်း မရှိတာပါ။ ဒါကြောင့် ၀ယ်တဲ့အခါမှာ နာမည်ကောင်းရှိတဲ့ vendor ပစ္စည်းအရည်အသွေးကောင်းတဲ့ vendor ဆီက ၀ယ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့် data တွေ မဆုံးအောင် corrupted file လို့ပြနေတဲ့ မင်မိုရီကတ်ထဲက data တွေကို ရသမျှပြန်ပြီး ဆယ်တင် (recover) လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။